कोरोनाका कारण भारतमा थप २५ जना नेपालीको ज्यान गयो, विश्वभर १ सय ८९ पुगे — onlinedabali.com
कोरोनाका कारण भारतमा थप २५ जना नेपालीको ज्यान गयो, विश्वभर १ सय ८९ पुगे
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा थप २८ जना नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । जसमा भारतमा मात्रै थप २५ जना नेपालीको ज्यान गएको गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले जानकारी दिएको छ ।
भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि थपिँदै गएको समितिका संयोजक डा. संजीव सापकोटाले बताए । अल इन्डिया इष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स नयाँ डिल्लीमा कार्यरत डा. सागर पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार यो हप्ता भारतमा थप २५ नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भएको हो । भारतको महाराष्ट्रमा रहेका नेपालीहरु बढी प्रभावित छन् ।
यस्तै यही साता साउथ अफ्रिकामा पहिलो पटक एक नेपालीको पनि ज्यान गएको छ । साउदी अरबमा २ जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा मात्र १ सय ८९ जना नेपालीको ज्यान गएको छ । शनिवार साँझ सम्म नेपालका ५८ सहित विश्वभर २ सय ४७ जना नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ । तर वीरगंजका दुई जनाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गर्न बाँकी छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणदर वृद्धि हुँदै गएपछि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समितिले स्पेन, बेल्जियम, युके, अमेरिकालगायतका देशमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्धि हुन थालेपछि नेपाली समुदायलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरेको छ । समितिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु हुनसक्ने सम्भवना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक यातायात तथा अन्य मानिसहरु भेला हुने स्थलमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ३७ हजार ४ सय २४ जना नेपाल फर्किएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली दूतावास र कुटनीतिक नियोगलगायतसँगको सहकार्यमा उनीहरुको उद्दार गरिएको हो । नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि थप ५४ वटा थप उडान गर्न अनुमति दिएको छ । उद्धार उडान आगामी शनिबार (८अगष्ट) सम्म हुनेछ ।
चौथोपटक अनुमति दिइएका मुलुक तथा सहरहरुमा जापान, मलेसिया, चीन, कुनमिङ, अस्ट्रेलिया, जेद्दा, दुबई, रियाद, कुवेत, कतार, दमाम, अबुधाबी र सारजाहा छन । गैरआवासीय नेपाली संघले ती स्थानमा रहेका आफ्ना समन्वय समितिलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकिएको गैरआवासीय नेपाली संघको ‘कोभिड १९’ उच्चस्तरीय समितिको प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए । यो साता भारतसहित २९ वटा मुलुकबाट उद्दार उडान भएको थियो ।